Britain oo dooneysaa inay xirto xuduudaha waxayna muwaadiniinta ka codsaneysaa inaysan safrin
HomeWararka CaalamkaBritain oo dooneysaa inay xirto xuduudaha waxayna muwaadiniinta ka codsaneysaa inaysan safrin
Boqortooyada Midowday (UK) ayaa dhawaan ku dhawaaqi doonta qorshayaal xadidaad dheeraad ah oo dhanka xuduudaha ah iyadoo la isku dayayo in la xakameeyo faafitaanka coronavirus ka dib markii nooc cusub oo aad u badan lagu arkay wadanka.
waxaa lagu wargaliyay Wasiirka Michael Gove, isagoo la kaashanaya isku duwa dhanka shaqada dowladda.
“Waxaan dhawaan soo bandhigi doonaa qorshayaal cusub oo ku saabsan sida saxda ah ee aan u ilaalinayno xuduudaheena isla markaana aan u xadeyn doonno howlaha safarka ee caalamiga ah,” ayuu u sheegay Sky News.
– Farriinta ku socota muwaadiniinta Ingiriiska, si kastaba ha noqotee, waa iska cadahay inaysan safrin.
Shalay, Raiisel Wasaaraha Boris Johnson wuxuu soo bandhigay xiritaan cusub ee Britain, dowladdu ma rajeynayso inay jilciso kahor bisha Febraayo.
Xaalada Britain ayaa ah mid cakiran marka la eego Corona waxana hada xanuunka uu u gudbay kooxaha ka dhisan wadankaasi iyo ciyaaryahanada.